Gaadiidka u rog hogaan leh WP Hagaha | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Taraafikada u beddel hoggaan leh WP Hagaha
Taraafikada u beddel hoggaan leh WP Hagaha
Waxaan u maleynayaa inaad aqbali doonto markaan idhaahdo: socodsiinta ganacsiga internetka hawl fudud maaha. Waa inaad si sax ah u dejisaa mareegahaaga, ku dar alaab, ka dibna suuq geyn doonta jahannamada ganacsigaaga. Ma ahan kuwa qalbi jabay, si ka sii badan kuwa bilowga ah.
Xitaa dadaalkaaga oo dhan, ganacsigaagu wuxuu ku kici karaa isla markiiba haddii aadan u beddelin taraafikadaada macaamiisha lacag-bixinta. Haddii qofna aanu iibsan wax kasta oo aad iibinayso, waxaad khasaarinaysaa doolarka suuq-geynta. Ma wanaagsan.
Caadi ahaan, waxaad ogtahay inaad dhibaato ku jirto haddii aad diiwaangelinayso sicirka bounces sare iyo heerarka ka tegista gaadhiga. Waad xayiran tahay sababtoo ah warbixintaada falanqaynta waxay sheegaysaa inaad dhalinayso taraafig badan, laakiin kuma dhacayso iibka bartilmaameedka ah.
Laakiin ka waran haddii aan kuu sheego inaad 10x taraafig badan u rogi karto hoggaan u qalma iyo macaamiil cusub. Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso inaan lugtaada jiidayo, sax? Waan ogahay, waxay u egtahay hadaf aan la gaari karin.
Hagaag, waxay noqon doontaa wax aan macquul ahayn haddii aadan haysan qalab awood leh sida WP Guidant, mawduuca dib u eegista maanta. WP Guidant waa sida in la haysto kaaliye dukaan toos ah oo ku hagaya macaamiisha alaabta ay rabaan.
Hagaag, halkii aad ku tuuri lahayd badeecad kasta/adeeg kasta oo aad ku hayso macaamiisha wejigiisa adiga oo rajaynaya in ay wax ku dheggan yihiin, waxa kaliya oo aad tusaysaa macmiilka waxa uu u baahan yahay. Taasi, saaxiibkay, waxay kordhin doontaa heerarka beddelka, iyo ugu dambeyntii, iibka.
Dib-u-eegga maanta, waxaanu daboolaynaa WP Guidant, mid ka mid ah wax-ka-beddelka wax-ka-beddelka plugins ee aad waligaa heli doonto. Plugin-ku wuxuu ku siinayaa sida saxda ah ee aad u baahan tahay si aad u baabi'iso curyaaminta doorashada, carqaladaynta iyo, natiijada, kor u qaad iibka sida halyeeyga aad tahay.
Markaa, isku shub koob kafee ah oo aan u dhaadhacno ganacsiga.
Waa maxay Hagaha WP?
Waxyaabaha ugu horreeya marka hore, aan wax badan ka barano WP Guidant. Waa maxay Hagaha WP? WP Guidant waa plugin cajiib ah oo WordPress ah kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku hagto iibsadayaasha marinka iibka. Haa, way fududahay taas.
Markaa, intii aad tusi lahayd macaamiishaada buug-yarahaaga oo dhan, waxa kaliya oo aad tustaa alaabta (yada) ay u badan tahay inay iibsadaan. Habkaas, waxaad ka fogaan kartaa dhacdo caadi ah oo loo yaqaan doorashada ama curyaaminta go'aanka.
Curyaaminta go'aanku waxay dhacdaa marka ay tahay inaan ka dooranno xulashooyinka ay adag tahay in la barbardhigo. Si fudud loo sheego, curyaanka go'aanka waxaa lagu tilmaami karaa inuu haysto waqti adag oo kala doorashada A ama B oo aan doorano [doorashada] C ama waxba ha samayn haba yaraatee. – Dib-u-dhigid.com
Tusaale ahaan, waligaa ma istaagtay dariiqa dukaanka weyn ee aan awoodin inaad ka doorato 20 dhadhan oo kala duwan oo caano fadhi ah? Isla halkaas, mi amigo, waa curyaaminta go'aanka ficil ahaan.
Milkiile meherad intarneedka ah, waxaa lama huraan ah in la fahmo sida curyaaminta go'aanku u curyaamin karo ganacsigaaga. Haddii macmiilku aanu si dhakhso ah u heli karin waxa uu u baahan yahay (maxaa yeelay waxaad soo bandhigtay doorashooyin badan), waxay u badan tahay inay ka baxaan boggaaga oo ay aadaan meel kale. Taasi waxay u tarjumaysaa iibka lumay.
Sidee buu Hagaha WP u caawiyaa?
Hadda, Hagaha WP wuxuu kaa caawinayaa inaad ka gudubto curyaaminta go'aanka mareegahaaga. Plugin-ku waxa uu ku imanayaa iyadoo ay ka buuxaan dhammaan sifooyinka aad u baahan tahay si aad u hagto macaamilkaaga ilaa habka hubinta iyo wixii ka dambeeya. Waxaan wax badan oo ku saabsan waxa kaydka ah ku baran doonaa qaybta sifooyinka hoose.
Sida Wakaalad Shabakad Hal-abuur leh, WP Guidant waxa ay noo ogolaataa in aanu macaamiisheena siino hab lagu fududeeyo badeecooyinkooda iyo adeegyadooda kala duwan si ay u fududaato in la isticmaalo hage waxtar leh iyada oo u ogolaanaysa fursada in ay kor u kacdo, taas oo horseedaysa korodhka iibka. - Kevin Perrow
WP Guidant waa qalab la yaab leh si kor loogu qaado heerarka beddelka ee dhammaan noocyada mareegaha. Waxaad u isticmaali kartaa plugin-ka eCommerce, ballan-qaadista hantida ma-guurtada ah, adeegyada SEO, kiraynta baabuurta, ra'yi celinta macaamiisha, diiwaangelinta webinar, ku-qoritaanka iimaylka, jiilka hogaanka, iyo in ka badan.
Runtii aad bay u xoog badan tahay. Weli, plugin-ku waa bilow-saaxiibtinimo, taasoo la macno ah inaad ku dejisan karto arrin daqiiqado ah oo aad ku dhufatay iibintaada si xad dhaaf ah. Horumariyayaashu waxay ku siinayaan nooc bilaash ah oo kuu ogolaanaya inaad tijaabiso biyaha, laakiin waa inaad u cusboonaysiisaa nooca pro si aad u hesho doorashooyin badan.
Tilmaamaha Hagaha WP
Sida aan had iyo jeer idhaahdo, plugin ayaa kaliya u wanaagsan sida sifooyinka ay bixiso. Sidoo kale, bararka muujinta waa inaysan ku dhicin jidkaaga, taasoo la micno ah in plugin ay tahay inay fududahay in la isticmaalo.
WP Guidant WordPress Plugin waxa uu wataa sifooyin wanaagsan oo aad u fudud in la dejiyo oo la isticmaalo. Isku-dhafka ugu fiican, iyo sida saxda ah ee aad u baahan tahay.
Waa kuwan waxaad filan karto inaad jaleecdo.
Iibinta fudud ee la hago - Hagaha WP wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku hagto macaamiishaada alaabta la rabo isla markaaba ka dib markay ku soo degaan boggaaga.
filtarrada badan - Waxaad haysataa filtarro badan oo kaa caawinaya inaad macaamiisha ugu hagto badeecada la rabo si fudud.
Kaararka & Sliders - Waxaad isticmaali kartaa kaararka ama sliders si aad ugu ogolaato isticmaalayaasha inay si fudud u maraan badeecada ugu dambeysa.
Foomamka wada sheekeysiga - Hadda, waxaad kicin kartaa xiisaha isticmaalaha oo waxaad u rogi kartaa macaamiil suurtagal ah taas oo ay ugu wacan tahay foomamka talaabooyinka badan ee la qorsheeyay.
caqli-gal shuruudaysan - Kala soocida filtarrada sida waafaqsan habdhaqanka isticmaale ee foomkii hore, iyaga oo tusaya kaliya waxay u baahan yihiin.
Looma baahna nambar sireed - Hagaha WP way fududahay in la rakibo oo loo isticmaalo uma baahnid wax aqoon kood ah.
Is dhexgalka aan kala go 'lahayn ee qalabka aad jeceshahay - WP Guidant waxay si fudud ula midowdaa fiilooyinka sida WooCommerce, ACF, WPML, iyo ciidan badan oo LMS ah oo kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho xogta jirta hagahaaga. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa xogta noocyada boostada WordPress.
Naqshadeynta cajiibka ah - Hagaha WP wuxuu leeyahay qaabayn qurux badan oo ka dhigi doona macaamiishaada.
Log - Plugin-ku wuxuu kaydiyaa dhammaan habka uu isticmaaluhu u maro. Kadib waxaad falanqayn kartaa xogta ku jirta dashboardkaaga si aad ugu kordhiso hogaaminta dadaalka ugu yar.
Hagaha WP waa dhab ahaan waxa aad u baahan tahay si aad hoos ugu dhigto heerarka soo kabashada oo aad kor ugu qaaddo heerarka beddelka taasoo kaa tagaysa macaamiil ku qanacsan.
Iyada oo taasi ka baxsan tahay, aan aragno inta WP Guidant uu kugu kici doono.
Qiimaha Hagaha WP
WP Guidant waxa uu ku siinayaa qorshooyin qiimo jaban. Waxaad u diyaarin kartaa qorshayaasha sanadka ama waxaad iibsan kartaa shatiga nolosha iyadoo ku xiran baahidaada. Qorshayaashu waa:
Guul – Qorshuhu wuxuu dib kuugu celin doonaa $39 sanadkii hal goob. Haddii aad iibsato shatiga nolosha, qorshuhu wuxuu kugu kici doonaa $69.
Freelancer – Waxa ay 99 goobood ku kacaysaa $10 sannadkii. Haddii aad iibsato shatiga nolosha, qorshuhu waa $129.
Agency – Waxaa loola jeedaa hay'adaha, qorshaha wuxuu ku kacayaa $159 sannadkii 1,000 mareegaha. Haddii aad doorato shatiga nolosha, waxaad ka qayb qaadan doontaa $299.
Fikradayda, iibsashada shatiga nolosha ayaa macno badan samaynaysa waxayna kaa caawin doontaa inaad lacag kaydsato mustaqbalka fog. Iyo sida had iyo jeer, dooro qorshe u shaqeeya ganacsigaaga.
Hadda oo aad ogtahay inta uu le'eg yahay kharashka Hagaha WP, aan sii wadno qaybta madadaalada. Aynu rakibno oo tijaabinno plugin-ka. Waxaan la shaqaynayaa nooca pro, laakiin waa inaad marka hore rakibtaa nooca bilaashka ah ee WP Guidant.
Sida loo rakibo Hagaha WP
Maadaama nooca bilaashka ah ee WP Guidant uu ku jiro kaydka plugin ee WordPress.org, waxaad ku rakibtay plugin gudaha dashboardka maamulka WordPress.
U soco Plugins > Kudar Cusub, sida ka muuqata hoosta.
Marka xigta, geli "WP Guidant" sanduuqa raadinta ereyga muhiimka ah oo guji Ku rakib hadda badhan:
Marka xigta, daar plugin:
Hadda oo nooca bilaashka ah uu diyaar yahay, aan ku rakibno nooca pro.
Ka iibso plugin WP Guidant website-ka rasmiga ah, oo ku soo deji kombuyutarkaaga.
Marka xigta, u gudub Plugins > Kudar Cusub gudaha dashboardkaaga maamulka WordPress, sida hoos ku cad.
Ka dib markaa, guji Soo gal Plugin badhanka, ka dooro plugin WP Guidant kombayutarkaaga, oo dhagsii Ku rakib hadda badhanka, sida aynu hoos ku iftiiminno.
Hadda, waxaad diyaar u tahay qaybta xigta. Laga bilaabo liiska maamulka WordPress, dhagsii Hagaha WP, sida ka muuqata hoosta.
Marka xigta, geli furahaaga shatiga oo dhagsii Guddi badhanka, sida aynu hoos ku iftiiminno.
Firfircoonida ka dib, waxaad diyaar u tahay qaybta madadaalada - abuurista hagayaal si aad u bilowdo u hagida macaamiisha alaabta ay dhab ahaantii rabaan.
Sida Loo Sameeyo Hagaha WP Fudud
Abuuritaanka hagaha WP Guidant waa mid fudud sida A, B, C. Tusaale ahaan, waxaan isticmaalayaa dukaanka eCommerce. Tusaalaha tusaalahayagu wuxuu ku hagi doonaa isticmaalayaasha alaabada qayb gaar ah. Marka hore, dhagsii Abuur Hagaha Cusub badhan:
Marka xigta, geli magaca hagaha, cinwaanka hagaha (tani waxay ka muuqan doontaa dhinaca hore), iyo sharaxaad oo guji Abuur:
Iyadoo hagaha diyaarsan, waxaan u baahanahay filtarrada ku hagi doona macaamiisha badeecada ay u baahan yihiin.
Kadib, guji Samee Filter Cusub:
Intaa ka dib, geli faahfaahinta filtarkaaga oo guji Abuur hoose.
Hadda oo aan haysanno filter, aan ku darno kaarar. Shaashada filtarrada, dhagsii Maamul Kaararka badhanka, sida hoos ku cad.
Kadib, guji Samee Kaar Cusub:
Shaashada xigta geli calaamadda kaadhka iyo sawirka:
Click ah Xaaladaha Kaadhka tab ka dibna Abuur Xaalad Cusub:
Dooro shuruudaha kaadhka iyadoo ku xiran waxaad rabto, oo guji Abuur, sida ka muuqata hoosta.
Ugu dambeyntii, ku dhufo Keydso Isbedelada badhan:
Waxaad samayn kartaa filtarro iyo kaarar badan si la mid ah. Hadda, waxaad si fudud ugu baahan tahay inaad ku darto koodka gaaban ee Hagaha WP mar kasta oo aad rabto inaad muujiso hagahaaga.
Ku soo laabo dashboardkaaga WP Guidant, dhagsii si aad u nuqul ka sameyso summada gaaban.
Kadibna ku dar summada gaaban bog cusub oo daabac. Tusaale ahaan, tani waa sida tusaalaheennu u ekaado xagga hore:
Ma xuma ilaa shan daqiiqo oo shaqo ah 🙂
Ganacsiyo badan oo internetka ah ayaa u maleynaya in soo bandhigida buug-yaraha oo dhan ay tahay waddada ugu fiican ee la maro. Si kastaba ha ahaatee, habkan ayaa dib u dhici kara sababtoo ah curyaanka go'aanka. Natiijo ahaan, waxaad ku dhamaanaysaa heerar sare u kaca, heerarka beddelka oo hooseeya, iyo, ugu dambeyntii, iibka lumay.
Xalka sida WP Guidant ayaa kaa caawin doona inaad ka gudubto curyaanimada go'aanka. Waxay ku hagaysaa macaamiishaada alaabta ay u badan tahay inay iibsadaan, taasoo keentay in sicirka beddelka sareeyo, iyo iibka.
Waa maxay fikradahaagu? Oo ma isticmaashay WP Guidant ka hor. Noogu sheeg faallooyinka.
Bing ayaa ka furtay xarunta dukaanka Anshaxa ee UK
Sida Suuqgeeyayaasha Mawduuca ay u door bidi karaan xeeladahooda nuxurka si ay u muujiyaan isbeddelka aduunka dhacdooyinka